Mmadụ itoolu nwụrụ n’ihe mberede ụgbọelu n’ebe a na-eme ezumike n’akụkụ Manila
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Mmadụ itoolu nwụrụ n’ihe mberede ụgbọelu n’ebe a na-eme ezumike n’akụkụ Manila
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • News • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Obere ugbo elu dara ma gbawa oku na a ebe mgbaba na nso isi obodo Philippines Manila, na-egbu mmadụ itoolu, ndị ọchịchị kwuru. Ihe mberede a butere ọkụ wee zipụ ndị mmadụ ka ha gbapụ na ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na-achọ ijikwa ya.
Ndị ọrụ nchekwa ụgbọelu nke Philippines kwuru na ụgbọ elu ọkụ ahụ, nke nọ na njem mgbapụ ahụike sitere na Dipolog, obodo dị na ndịda Manila, apụọla na radar n'ihi amaghị ihe kpatara ya n'otu oge ahụ ọ dara.
Gbọelu a dabaara n’ogige ezumike dị n’obodo Pansol dị na mpaghara Laguna dị n’akụkụ ugwu Ugwu Makiling.
Achọpụtala ozu mmadụ asatọ rute ugbu a ma kwenyere na mmadụ itoolu niile nọ n'ụgbọelu ahụ nwụrụ n'ihe mberede ahụ. Abụọ ndị nọ n’ala merụrụ ahụ ma kpọgara ha ụlọ ọgwụ.